Xildhibannada Hirshabeelle oo Xukumaddooda ku eedeeyey Musuq-maasuq – Kalfadhi
Xildhibannada Hirshabeelle oo Xukumaddooda ku eedeeyey Musuq-maasuq
Golaha Wakiillada Dowlad Goboleedka Hirshabeelle, oo maanta kulankoodii 2-aad ee Kalfadhigooda 5-aad ee Golaha ku leh Magaalada Jowhar, ayaa si adag uga dooday Miisaaniyadaha 2018 iyo 2019, oo sida ay ku doodayaan aysan Hirshabeelle waxba ka hayn. Xildhibaannadu waxa ay aad uga doodeen gunnooyinkoodii, oo ka maqan ilaa sanadkii tagay.
Xildhibaan Maxamuud Wabar Xasan ayaa, isaga oo ku sugnaa Xarunta Golaha Wakiillada Hirshabeelle ee Jowhar, waxa uu u sheegay Kalfadhi in uu Goluhu ku haysto Xukumadda Hisrhabeelle halka ay ka baxday Miisaaniyaddii uu u ansixiyey Goluhu sanadkii hore ee 2018-ka. “Waxaan ka doodaynaa halka ay ku baxday Miisaaniyadii 2018-ka ee Hirshabelle, oo aan wali cadayn” ayuu Xildhibaan Maxamuud Wabar Xasan ku yiri Kalfadhi.
Xildhibaannada ayaa ku doodaya iney xukumaddu sameysay musuq-maasuq, si ay u eed baxdana ay tahay in ay uga jawaabto baarlamaanka doodaha ay ka qabaan sida loo maareeyey, halka ay ku baxday iyo sababta ay Xildhibaannadu u la’yihiin Mushaarkoodii sanad dhan. “Waxaan tuhunsannahay in ay jiraan wax-is-daba-marin dhanka dhaqaalaha ah” ayuu yiri Xildhibaan Maxamuud Wabar.
Kulanka Golaha Wakiillada Hirshabeelle ee maanta waxa uu ku soo beegmay iyada oo uu shalay dib ugu laabtay Jowhar Madaxweynaha Hirshabeelle, Maxamed Cabdi Waare, kaas oo ka tagay Muqdisho oo uu joogay waayadaan. Waare waxa uu, mar sii horeysay, iska xaliyey cadaadis la aaminsanaa in ay Xildhibaannadu ku saareen in uu ka mid dhigo xukumadda, isaga oo 30% ugu yaraan Xubnaha Golaha ka dhigay xukumaddiisa.
Hirshabeelle malahan ila-dhaqaale oo waa weyn, hase ahaatee Xildhibaannada ayaa la rumeysan yahay iney doonayaan iney gunnadooda ka helaan xukumadda, iyaga oo maanka ku haya qoondada miisaaniyadeed ee ay Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) ugu talogashay Hirshabeelle, taas oo aan la ogeen iney hadda ku jirto gacanta Xukumadda Hirshabeelle iyo in kale.
Ogow sababta aysan Xildhibaannadu dib ugu noqon deegaan-doorashadooda iyo qatarta arrintaas
Xasan Sh. Maxamuud oo rajo weyn ka qaba inuu mar labaad Soomaaliya hogaamiyo